PrimeTime အလင်း Way ကိုထွန်း - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » PrimeTime အလင်း Way ကိုထွန်း
က PrimeTime Lighting ထုတ်ကုန်, အေးမြစွမ်းအင်ချွေတာ, image ကိုတိုးမြှင့်စတူဒီယိုတစ်ခုပြည့်စုံအစုစုကိုပေး, ဗီဒီယိုနှစ်ဆယ်နှစ်ပေါင်းစတူဒီယိုအလင်းရောင်ဒီဇိုင်နာများခွဲခြားဆက်ဆံမှု၏တောင်းဆိုချက်များကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပြီစစ်မှန်တဲ့င်နေစဉ်နှင့် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး အမြဲတမ်းအမှုမဖြစ်တော်မူကြောင်းကို LED နှင့်ချောင်းအလင်းရောင်တူရိယာ။ သငျသညျစိတ်ကူးနိုင်သကဲ့သို့, အလင်းရောင်ဘဝကိုယ်နှိုက်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်သမိုင်းအတွက် fixed ဖြစ်ပါတယ်။ li ကြောင်းသံသယရှိစရာမလိုပါနိုင်ပါတယ် ghting ရှည်လျားသောလမ်းလာတော်မူပြီ ချက်ပြုတ်, အပူနှင့်အလင်း - ၎င်း၏အရေးပါပုံကိုလူလုပ်မီး triads တစ်ခုဖြစ်သည်။
လူလုပ်မီးရှာဖွေတွေ့ရှိမှုပြီးနောက်, (ချက်ပြုတ်နှင့်စခန်းမီးလောင်မှုကျော်လွန်ပြီး) အလင်းရောင်အတွက်လာမယ့်အဓိကရှာဖွေတွေ့ရှိမှုခဲ့ မီးအိမ်။ မြင့်မားတဲ့နည်းပညာအလင်းရောင်၏လောကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှင့်အတူဒုံးပျံ-နှစ်ကြာပြီးနောက်ခဲ့သည် Sconce။ ပြည်သူ့မဟုတ်တော့မီးကိုကိုင်ထားရတယ်! အံ့သြဖွယ်! ဤကဲ့သို့သောသပ်သပ်ရပ်ရပ်တီထွင်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သတ္တိတွေရဲ့ရန်ရာစုနှစ်များစွာ၏နံပါတ်ပြီးနောက်, ဘီး, အလီဗာ, ပိတ်ပင်တားဆီးမှုများနှင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း, သံအတုလုပ်တဲ့, (ကြောင်းချောမောအဲဒီမှာလူကဘယ်သူနည်း - အိုးစောင့်ဆိုင်း ... ) ကြေးမုံ, sundials, အ hourglass နှင့်ထိုကဲ့သို့သော illumination ၏အနုပညာရှေ့ဆက်အခြားခြေလှမ်းယူရန်အဘို့အ -like ကတစ်ဖန်, အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
1050 အေဒီန်းကျင်, ကျနော်တို့၏ပထမဦးဆုံးဖော်ပြထားခြင်းကိုရှာဖွေ cresset စသည်တို့ကိုရေနံ / အမဲဆီ / သစ်သား / အစေးနှင့်ပြည့်စုံ (ကသတ္တုခြင်းတောင်း များသောအားဖြင့် () ဝီလျံ II ၏နန်းစံစဉ်ကာလအတွင်းရှေးကျမ်းများတွင်ဖြစ်ပေါ်နေ) ကိုမီးရှူးတိုင်နှင့် sconce နည်းပညာအခမဲ့-ရပ်နေ Hybrid နှင့်တိုးမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တစ်တိုင်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ 1200 အေဒီ, ဒီ spiffy အသစ်သောနည်းပညာနှောင်းပိုင်းတွင်ညဥ့်အပြင်မှာဘာသာရေးအခမ်းအနားများနှင့်အခြားဖြစ်ရပ်များ / ဖျော်ဖြေမှုအလင်းဖို့အသုံးပြုလျက်ရှိခဲ့သည်။ ဤအ illumination devices များအသုံးပြုမှုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်နှစ်ပေါင်းရာနှင့်ချီကြာမြင့်; ကိုလိုနီအမေရိကားမှာရှိတဲ့အဆောက်အဦအချို့ပြင်ပအလင်းရောင်အဘို့ထိုကိရိယာများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
အဆိုပါ ဖယောင်းတိုင် ရောမသေလွန်သောသူတို့သည်သစ်ပင်များမှအတိုက်အခံများ nailing စတင်ရန် temerity ခဲ့မတိုင်မီကောင်းစွာရှေးခေတ်တရုတ်ထင်ရှားခဲ့သည်။ ကြောင့်သူတို့ကိုလုပ်လိုအပ်သောပစ္စည်းများနည်းပညာနှင့်ရရှိနိုင်၏မတူညီသောအဆင့်ဆင့်ရန်, ကမ္ဘာ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများနီးပါးအဖြစ်အလျင်အမြန်သည့်ဖယောင်းတိုင်မဖွံ့ဖြိုးခဲ့ဘူး။ သဘာဝကျကျ, Candelabra နည်းပညာမကြာမီ (တဦးတည်းရပျလုံးကိုကျော် sconces နှင့် cressets ကိုမြင်လျှင်စောင့်ရှောက်အထူးသဖြင့်လျှင်) နောကျမှလိုကျလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးတွင်အချို့တောက်ပဝိညာဉျကိုအတူတကွ2နှင့်2ထား, ထို 1450 ရဲ့အားဖြင့်ကျနော်တို့အလယ်ခေတ်ဥရောပတွင်မိုးလုံလေလုံဖျော်ဖြေပွဲအလင်းဖို့အသုံးပြုလျက်ရှိမျိုးစုံ Candelabra ဥပမာရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ကျနော်တို့ရှေးခေတ်အလင်းရောင်အဘို့အအချို့သောအသုံးအနှုန်းများကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံမိန့်ခွန်းမှထွက်ခွာရန်မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စုပေါင်းသမိုင်း၌ဤမျှကာလပတ်လုံးအဘို့အ illumination ဤဟောင်းပုံစံများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ မီးပုံ, မီးရှူးနှင့်ဖယောင်းတိုင်ယခု timeless ဖြစ်ကြသည်။ မြောက်ပိုင်းအမေရိကပြင်ပမှာ, ဓာတ်မီးမကြာခဏမီးသို့မဟုတ်လျှပ်စစ်မီးဟုခေါ်ကြသည်။ Candlepower (က CP) တုန်းပဲအချို့သောလူများက illumination တိုင်းတာရန်အသုံးပြုသည်။ တောင်မှအတွက်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေတ်သစ်တိုင်းတာသုံးပြီး Lumens & Lux ကျနော်တို့နေဆဲအကြောင်းကိုနားမထောင် Candela နှင့် ခြေလျင်ဖယောင်းတိုင်.
Next ကို footlights, ဇာတ်စင်အလင်းရောင်အတွက်ထို့နောက်အမျိုးမျိုးသောတိုးတက်လာနောက်တော်သို့လိုက်, ပြီးတော့ 1783 အတွက်ရေနံဆီမီးခွက်သည်ပြင်သစ်တွင်တီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုလျင်မြန်စွာအခြားဖွံ့ဖြိုးပြီးလူမျိုးတို့ပျံ့နှံ့ကြောင့်စင်ပေါ်မှာမတိုင်မီ 18 ၏အဆုံးမှအသုံးပြုမှုအတွက်မွေးစားခဲ့သည်th ရာစု။ အစောပိုင်း 1800 ရဲ့ပြဇာတ်ရုံထဲမှာဓာတ်ငွေ့အလင်းရောင်၏ထွန်းကားအဖြစ် streetlights များအတွက်၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမြင်တော်မူ၏။ ထိုအခါနောက်ဆုံး hurray လျှပ်စစ်အလင်းရောင်၏မရောက်မီရောက်လာတယ်။ အဆိုပါထင်ရှားကျော်ကြားလာခဲ့သည်။ အဆိုပါထင်ရှားကျော်ကြားလာခဲ့သည်အသုံးပြုပုံ 1820 အတွက်တီထွင်ခဲ့သည် Goldsworth Gurney, အင်္ဂလိပ်တီထွင်သူနှင့်လူကြီးလူကောင်းသိပ္ပံပညာရှင်။ 1836 အများပြည်သူဖျော်ဖြေရေးအဘို့အ၎င်း၏ပထမဆုံးအသုံးပြုခြင်းကိုမွငျလြှငျ, ဒါဟာပထမဦးဆုံးလူထုမှစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်အချိန်တွင်ပြုလုပ် koniaphostic အလင်းအဖြစ်လူသိများခဲ့ပြီး Magician Ching Lau Lauro တစ်နှောင်းပိုင်းတွင်စွမ်းဆောင်ရည်အလင်းဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ တစ်နှစ်အကြာတွင်ထင်ရှားကျော်ကြားလာခဲ့သည်ပထမဦးဆုံး (လန်ဒန်) ကို Covent ဥယျာဉ်ကဇာတ်ရုံမှာအိမ်တွင်းအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါ 1860 ရဲ့အသုံးပြုပုံအများဆုံးအဆင့်မြင့်လူအမျိုးမျိုးရုပ်ရှင်ရုံ, playhouses နှင့် suchlike အတွက်ထင်ရှားကျော်ကြားလာခဲ့သည်အသုံးချဖို့ခဲ့ကြသည်။ ပုံဟူသောဝေါဟာရကို koniaphostic အလင်းဘုံအသုံးပြုမှုများအတွက်အရမ်းရှုပ်ထွေးရှိ၏ အထွေထွေပြည်သူ့ပိုကောင်းထင်ရှားကျော်ကြားလာခဲ့သည်၏အသံကြိုက်တယ်။ သူတို့က "ဟာထင်ရှားကျော်ကြားလာခဲ့သည်" ဟူသောဝေါဟာရကိုနေဆဲယနေ့အသုံးပြုသောကြောင်း, တကယ်တော့ဒါကြောင့်လည်းကြိုက်တယ်, koniaphostic အလင်းပြီးနောက်ရာစုပေါရာဏဖြစ်လာခဲ့သည်။
ထိုအခါလျှပ်စစ်မီးများအသုံးပြုမှုကိုပိုမိုလက်တွေ့ကျတဲ့နှင့် Arc Lamps ဖြစ်လာမှစတင်လုံးဝနီးပါးနှောင်းပိုင်း 1800 ရဲ့ / အစောပိုင်း 1900 ရဲ့အားဖြင့်ထင်ရှားကျော်ကြားလာခဲ့သည်ထွက် edging ဇာတ်နာအောင်ပြောခြင်းအလင်းရောင်အတွက်လာမယ့်လှိုင်းတွေဖြစ်လာတယ်။ ဘော်စတွန်အတွက် Bijou ပြဇာတ်ရုံအက်ဒီဆင်၏တီထွင်မှု၏ပြဇာတ်ကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်ပထမဦးဆုံးအမေရိကန်နေရာဖြစ်လာခဲ့သည်။ 1903 ခုနှစ်တွင်နယူးယောက်စီးတီးအတွက်မြို့တော်နဲ့ Opera House က 116 dimmer switches များနှင့်အတူပြည့်စုံသဘင်နှင့်နာယကရောနှောသည်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားအဘို့လုံးဝကြိုးပဲ! ဒီစနစ်က၎င်း၏ 118 အတွက် Kliegl ညီအစ်ကိုများက Universal လျှပ်စစ်အဆင့် Lighting ကုမ္ပဏီ (ယခုအားဖြင့် installed ခဲ့သည်th တစ်နှစ်တာ) ။
အဆိုပါအက်ဒီဆင်၏ထွန်းနှင့်သူ၏လျှပ်စစ်အလင်းတို့နှင့်လည်းမမျှော်လင့်တဲ့ schism ရောက်လာတယ်။ အနုစိတ်အလင်းရောင်ယခုလည်းရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံများ၏အသွင်အပြင်ကြောင့်, စတူဒီယိုမှာလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ အခြေခံမူအချို့ကိုအတူတူပင်ရှိနေဆဲဖြစ်သော်လည်း, ဇာတ်စင်နှင့်စတူဒီယိုမတူကွဲပြားသူတို့ရဲ့ရမှတ်များလုပ်ပါ။ တစ်ဦးကခေတ်သစ်အလင်းရောင်အင်ဂျင်နီယာထွက်ရှိသောနှစ်ဦးစလုံးကွင်းထဲကနေလှည့်ကွက်များနှင့်အကြံပြုချက်များကိုပါဝငျသောအသိပညာ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။
ပေါ်လာဖို့မီးအတွက်လာမယ့်အပြောင်းအလဲတချို့အတွက်မီးမောင်းထိုးခဲ့ပါတယ်။ 1904 ခုနှစ်တွင်လူးဝစ် Hartmann built နှင့်သေးငယ်တဲ့ (5 "မှန်ဘီလူး) အသုံးပြုသွားမည်မီးမောင်းထိုး, တစ်ဦး ကလေးမှန်ဘီလူး, Flash ကို-ရှေ့ဆက် 50 နှစ်ပေါင်း "။ အဆိုပါဂီတဆရာ" ၏သည်ဒါဝိဒ် Belasco ထုတ်လုပ်မှု 110 watts က & / သို့မဟုတ်က CP ကိုအသုံးပြုလျက်, မီးမောင်းထိုးအခြေခံကျကျပြောင်းလဲခဲ့သည့်။ အထက်ဖြစ်ပါတယ်ပြသ အဆိုပါနေရာမှာဂု 41 LED ကို Fresnel ။ ဒီ model တဲ့နေရာမှာဂုဟက်, အငြိမ်းစားပုံသေနည်းပြိုင်ပွဲကားတစ်စီးမောင်းသူနှင့်မော်တော်ကားများ၏အစီအမံသည်နှင့် လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ။ သူသည်လက်ရှိတွင် 1975 ခုနှစ်တွင်ကုမ္ပဏီတို့သည်လက်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာနှင့် PrimeTime Lighting စနစ်များမှာကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဒါရိုက်တာ (နေရောင်ခြည် Kinetics, မိမိထုတ်ကုန်လိုင်း KW /2အလင်းလ်တာခဲ့ 2010 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီ၏လက်ရှိလူ့ဇာတိအဖြစ်အလုပ်လုပ်နေပေမယ့်သာဖြစ်ပါတယ် နေရာမှာဂုချုပ်အင်ဂျင်နီယာချုပ်အဖြစ်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ပြောင်းလဲမှုနေသော်လည်းအလငျးလ်တာ) တူညီသောအစွန်းရောက်အရည်အသွေးမြင့်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အကျန်တာတွေရှိနေဆဲအခြေအနေကိုအောက်မှာ။ အသစ် နေရာမှာဂု 41 LED ကို Fresnel မီးမောင်းထိုးအပြည့်အဝရလှေမျးမိုးမှာ° 11 ရန်, အပြည့်အဝမီးမောင်းထိုးအပေါ် 80 °ကနေချိန်ညှိအလင်းလက်ဆေးသည်။ ဒါဟာ 50,000 နာရီတစ်သက်တာပါတယ်။ ၎င်း၏စေ့စပ်ဒီဇိုင်းအပူစုပ်၎င်းထိုသို့လုပ်ကိုင်ရန်တစ်ပန်ကာမလိုအပ်ပါဘူး။ အဆိုပါမီးမောင်းထိုးအနည်းဆုံးစွမ်းအင်အသုံးစရိတ်နှင့်အတူပင်မြင့်မားသောပါဝါအလင်းထုတ်လုပ်သည်။ ဒါဟာသီးခြား onboard အလင်းမှိန်ခြင်းနှင့်အတူ DMX 512 အသုံးပြုသည်။ ခေတ်သစ်အလင်းရောင်၏ဤအံ့ဩရဲရငျ့စှာပွောမှောင်မိုက်အမှုန့် coated ထိန်းချုပ်မှုအိုးအိမ်နဲ့ extruded လူမီနီယံကိုယ်ထည်တွင်ပါရှိသောနှစ်ခုမော်ဒယ်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်: 3000K သို့မဟုတ် 5000K - 90CRI သည့်မော်ဒယ်နှစ်ခုလုံးအတွက် (အရောင်က rendering အညွှန်းကိန်းနှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံး - တစ်အဲသည်ကောင်းသော CRI တစ်ခုများအတွက် Fresnel LED!) ။
ချောင်းအလင်းအိမ် 1800 ရဲ့နှောင်းပိုင်းအတွင်းဂျာမန်တစ်ဦးမဖြစ်နိုင် pair တစုံတို့ကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးကဖန်ခွက်မှုတ်တံ - Heinrich Geissler နှင့်ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်သူဒေါက်တာ Julius Plücker။ အက်ဒီဆင်နှင့်တက်စလာနှစ်ဦးစလုံးအလင်းရောင်ဤစွမ်းအင်ကိုအကျိုးရှိစွာလမ်းကြောင်းအပေါ်ရရန်ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာပထမဦးဆုံးချောင်းဆီမီးလမ်းကြောင်းကိုလြှော့ကြောင့်အလင်းရောင်များဒီ Branch သို့ပတေရုသ Cooper ကဝစ်ရဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်ခဲ့သည်။ တီထွင်သူနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်သူများအလင်းရောင်၏ဤတောက်ပအကျိုးရှိစွာပုံစံနှင့်အတူစမ်းသပ်စောင့်ရှောက်လျှင်, ယနေ့ PrimeTime Lighting စနစ်များချောင်းထုတ်ကုန်များ၏ထိပ်တန်းလေယာဉ်လိုင်းရှိပါတယ်။ လက်ဝဲမှ Glen ဟန်၏တီထွင်မှု့တဦးတည်းနမူနာဖြစ်ပါသည် ချောင်းနှင့်နေရာမှာဂုဟက်။ အဆိုပါ 1SL255 ။
ဤသည်အစွမ်းထက်ချောင်းဆီမီးခွက် 10,000 X ကို 2w T55 triphosphor အမွှာ-ပြွန်မီးခွက်အသုံးချဖို့,5နာရီကြာရှည်ခံသည်။ ဒါဟာအလုံးစုံချက်နဲ့ချောင်းအလင်းက၎င်း၏အလျားလိုက်ဝင်ရိုးအပေါ်ဒေါင်လိုက်ဝင်ရိုးပေါ်မှာအာရုံစိုက်ရောင်ခြည် 44 °ပစ်နှင့် 90 °နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုသင်တောက်တောက် (အများအားဖြင့်အဆိုတော်) ကိုတက်ပွင့်လင်းစီစဉ်သမျှမှာရည်ရွယ်ပါသည်။ ဤသည်အလင်းဘက်သို့မဟုတ်နောက်ကျောတစ်ဦးကိုပစ်ခတ်ဖြည့်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာ 82-85 CRI ရှိပါတယ်။ ဤသည်မှာပါဝါထိရောက် tool ကို 1.0V မှာသာ 120 AMPS အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာ daisy-ကွင်းဆက်စတိုင်နှင့်ဆက်စပ်နိုင်ပြီးမဟုတ်သောအလင်းမှိန်ခြင်း, လိုင်းဗို့အား, Analog စ, ဒါမှမဟုတ်အပြည့်အဝ-ဒစ်ဂျစ်တယ် DMX အလင်းမှိန်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ရရှိနိုင် options များပါဝင်သည်: ပျားလပို့, barndoor နှင့် gelframe ဆက်စပ်ပစ္စည်း။
ပြဇာတ်နှင့်မီဒီယာအလင်းရောင်ဤနောက်ဆုံးဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်ကနေရှည်လျားသောလမ်းလာခဲ့ပါသည်။ ကုပညာရှင်များပေါင်းစပ်နှင့်မောင်းနှင်ဆန်းသစ်အင်ဂျင်နီယာများနှင့်အတူပူးတွဲလုပ်ကိုင်သည့်အခါအဆိုပါစက်မှုလုပ်ငန်းကြီးမြတ်အကျိုးအမြတ်စေသည်; Glen ဟန်နှင့်နေရာမှာဂုဟက်လူတိုင်းကသူတို့ကိုလှည့်ပတ်သွားမယ့်အရာကိုတစ်ဦးချွန်ထက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရုပ်ပုံရှိကြောင်းအာမခံထားဖို့လိုင်းထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများထိပ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်ထောက်ပံ့ဖို့သူတို့ကိုယ်သူတို့အပျနှံခဲ့ကြပါပြီ။ သူတို့ဟာ illumination မှာသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုခေါ်ဆောင်အကောင့်သို့တစ်ခုချင်းစီ setting ကို၏ထူးခြားသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်တာ, အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောနေရာများမှသူတို့ကိုလျှောက်ထားကြပါပြီ။ PrimeTime Lighting စနစ်များ, စင်မြင့်အဘို့, LED မီးနှင့်ချောင်း-based အလင်းရောင်၏ထုတ်လုပ်သူ-အစွန်းဖြတ်တောက်စတူဒီယိုနှင့်ကျော်လွန်လျက်ရှိသည်။
PrimeTime Lighting အကြောင်း
နောက်ကျော 1975 မှ PrimeTime Lighting စနစ်များရက်စွဲများ၏အမြစ်များကို KW /2PrimeTime Lighting ဒီဇိုင်းနှင့်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်ရန်, နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. နေရောင်ခြည် Kinetics အောက်မှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်သောအခါ, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစုဆောင်းခြင်းလယ်ကွင်းအချို့အပါအဝင်ထိရောက်သော, သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်နှင့်ဆက်စပ်သောပစ္စည်းများ, ကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။ KW /2PrimeTime အလင်းအာကာသစခန်းများအတွက် optical စနစ်များကိုဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်နာဆာကရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်, နှင့်အခြားအစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကဖက်စပ်လုပ်ငန်းများများအတွက်အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ဒီမြင့်မားနည်းပညာပိုင်းကနေ, သုတေသနမောင်းနှင်နောက်ခံတစ်ဝန်ကြီးချုပ် LED နှင့်ချောင်းအလင်းရောင်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း PrimeTime Lighting စနစ်များ, Inc ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ အားလုံး PrimeTime Lighting စနစ်များထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းနှင့်သီးသန့်လုပ်ကြံအမေရိကန်နှင့်ဒီဇိုင်းနှင့်အင်ဂျင်နီယာအထောက်အထားများအဖြစ်တစ်ဦး2နှစ်အာမခံ၏ဥစ္စာဓနအားဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုနေကြပါတယ်။ PrimeTime ၏ထုတ်ကုန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်လျှောက်လုံးနှင့်အချို့သောနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များတွင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးသတင်းအစုံ, ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယို, ဗီဒီယိုကွန်ဖရအဆောက်အဦးများ, ကိုးကှယျခွငျးသည်များ, ဘာသာရေးအသံလွှင့်စတူဒီယို, မြို့ကောင်စီအခန်းများနှင့်အကွာအဝေးသင်ယူမှုစာသင်ခန်း illuminating တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ PrimeTime ဒဏ္ဍာရီပြိုင်ပွဲကားတစ်စီးမောင်းသူနှင့်အင်ဂျင်နီယာ, နေရာမှာဂုဟက်ကတည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဇွန်လ 21, 2013, Dallas မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်တွေ Glen ဟန်နှင့်ဇနီးတွင်, စင်သီယာဟန် PrimeTime Lighting စနစ်များဝယ်ယူ, Inc ဟက်အသစ်သောထုတ်ကုန်များ PrimeTime ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်မျိုးဆက်၏အင်ဂျင်နီယာနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းပါဝင်ပတ်သက်နေဆဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါ နေရာမှာဂု 41 နဲ့ LED Fresnel ဧပြီလ 2014 မှာပွဲထွက်ခဲ့ပြီး NAB ပြရန်ဇူလိုင်လအတွက် LED luminaires အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည်စွတ်ဖားစီးခြင်းစီးရီးကိုခေါ်။ အသစ် 1SLED နှင့် MSLED အကြီးအကျယ် PrimeTime ရဲ့အထင်ကရ 1SL နှင့် MSL ချောင်းကလွှမ်းမိုးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအခြားအယ်လ်အီးဒီနှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးတသမတ်တည်းပျော့အလင်း output ကိုအတူ rendering တစ်ခုတည်းအရိပ် feature ခဲ့ကြသည်။ KW /2branded အလင်းရောင်လ်တာနေဆဲအများအပြားစတူဒီယိုအတွက်အသုံးပြုကြသည်ပေမယ့်, ကုမ္ပဏီ 2010 အတွက် PrimeTime အားလုံးကိုအမှတ်တံဆိပ်အမည်များကိုပြောင်းလဲနှင့်ကုမ္ပဏီ PrimeTime Lighting စနစ်များ, Inc အဖြစ်လူသိများသည်အလင်းလ်တာ, မခွဲခြားဘဲနာမ, ထုတ်လွှင့်စတူဒီယိုတစ်ခုအဓိကဖြစ်ကြောင်း , ရုပ်သံဆွေးနွေးပွဲအဆောက်အကိုးကွယ်သည်များနှင့် PrimeTime ရဲ့ဒဏ္ဍာရီစွမ်းဆောင်ရည်, ရေရှည်တည်တံ့ durabiity နှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားနှင့်အတူထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, 214-393-5998 မှာကိုညွှန်ကြားသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို illuminating အသေးစိတ်ကြှနျုပျတို့၏ website များတွင်အနည်းငယ်ပိုမိုနက်ရှိုင်းတူးကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပါ!
2014 NAB ပြရန် 2014 NAB ပြရန် 2014 NAB ပြရန်, NAB ပြရန် 2014 အသံလွှင်း ထုတ်လွှင့်စတူဒီယိုအလင်းအိမ် Cynthis ဟန် Glen ဟန် နေရာမှာဂုဟက် အလင်းရောင် PrimeTime Lighting မီးထိုး ပြဇာတ်ရုံအလင်းအိမ်	2014-10-17
ယခင်: HBO OTT ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်၎င်း၏အနာဂတ်ထိန်းချုပ်တာဖြစ်ပါတယ်
နောက်တစ်ခု: မြှားမီဒီယာငျြအမွ "Ultimate လေဆိပ်ဒူဘိုင်း" ၏ဆန်းသစ်သောထုတ်လုပ်မှုစဉ်အတွင်းနေ့စဉ်ရွှေ့ပေးရန် Aframe အသုံးပြု